मुख्य कुरा त्यो सहकार्य, एकता, समूह वा गुटले सिर्जना गरेको फिल्म कत्तिको राम्रो छ भन्ने हो । नेपालमा निर्देशक रामबाबु गुरुङ र अभिनेता दयाहाङ राईको जोडी वा दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौलाको जोडीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । धेरै वटा फिल्ममा काम गरिरहादा पनि यी जोडीले आफ्नो कामको स्तर कायम राख्न सकिरहेका छन् कि छैनन् ?
फिल्म मेकिङलाई धेरैले टिमवर्कका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । हुन पनि धेरै वटा विधा र विभागमा काम भएपछि मात्रै फिल्म बन्छ । सुटिङ जानुअघि एक चरण, सुटिङमा एक चरण र पोस्ट प्रोडक्सन गरी तीन चरणमा बन्ने फिल्ममा धेरै जनशक्ति प्रयोग भएको हुन्छ । फिल्मको लेखन, पाश्र्वसंगीत, प्रोडक्सन डिजाइन, छायांकन, सम्पादन, अभिनय र निर्देशन यतिलाई मुख्य विधा मानिन्छ । यी विधामा काम गर्ने मानिसहरू एक–अर्काको खुबी र रुचिसाग परिचित भएको खण्डमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनिन्छ । अर्का एकथरी चाहिँ फिल्म निर्देशकको विधा हो, यसमा अरु प्राविधिक कलाकार को हुन्छन् भन्ने गौण हुन्छ, फिल्म निर्देशकले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बन्छ भन्ने पनि छन् ।
फिल्मलाई टिमवर्क मान्ने हो भने मिल्दो टिममा काम गर्दा बेफाइदा के छ ? मन मिल्दा मानिसहरू, जसलाई एक–अर्काको शक्ति र कमजोरी थाहा छ, तिनले लामो समय सँगै काम गर्दा समूहको निर्माण हुन्छ भने त्यसले हानी के गर्छ ? बेलाबेला फिल्ममा गुटबन्दीको कुरा आउँदा यस्ता प्रश्न उठ्ने गर्छन् ।
फिल्ममा मात्र होइन, समाजका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कुरा मिल्ने मानिसहरू एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक हो । जसलाई जोसँग काम गर्न सजिलो लाग्छ, उसैलाई रोज्नु पनि सामान्य हो । समस्या चाहिँ तब सुरु हुन्छ, जब चिनेको वा सजिलोको नाममा उसलाई नआउने काम पनि लगाइन्छ वा कसैको क्षमताभन्दा बढी भूमिका दिइन्छ । र, यसकै कारण कोही साँच्चिकै क्षमतावान् मानिस पाखा परेको छ भने त्यो पनि समस्या हो । यसका अलावा उस्तै सोच भएका मानिसले समूह वा गुटै बनाउँछन् भने पनि त्यो ठूलो आपत्तिको विषय होइन । तर, कसैले गुट बनाएर अनुचित काम गर्छ वा समग्र कामको गुणस्तर नै खस्काउँछ भने चाहिँ त्यो आपत्तिको कुरा हो ।
संसारका ठूला फिल्म उद्योगहरू हलिउड–बलिउडमा पनि निर्देशक, छायाकार, सम्पादक र कलाकारहरूको यस्तो समूह बनेको देखिन्छ । र, ती समूहले साँच्चिकै शानदार काम गरेका भेटिन्छन् । बलिउडमा निर्माता विधुविनोद चोपडा, निर्देशक राजकुमार हिरानी र छायाकार विनोद प्रधानको यस्तो समूह निकै चर्चित छ ।
बलिउडमा अहिले पनि यशराज र धर्माजस्ता ठूला प्रोडक्सन हाउसहरूले केही निर्देशक, कलाकार र प्राविधिकहरूलाई आफ्नै मात्र काम गर्ने जसरी राखेका छन् । अझ अहिले त कतिजनासँग एकैचोटी पाँच सातवटा फिल्मको कन्ट्याक्ट गरिएको हुन्छ, जसको काम नसकिन्जेल ती प्राविधिकले अरूको काम गर्न पाउँदैनन् ।
हलिउडमा पनि स्टिवल स्पिलवर्गले कुनै बेला टम ह्यांक्स र पछि लियोनाड्रो डिक्याप्रियोसँग त्यस्तै समूह बनाएका थिए । मार्टिन स्कोरसेजी र रोबर्ट डि निरोको जोडी निकै चर्चित छ । क्वन्टिन टोरन्टिनो र उमा थुरम्यानको जोडी पनि यस्तै थियो । कतिपय निर्देशकहरू यस्ता हुन्छन्, जसले साधै एउटै सिनेम्याटोग्राफरसँग काम गर्छन् । यसपटक ओस्करमा उत्कृष्ट फिल्म, निर्देशक र सिनेम्याटोग्राफर आदिमा मनोनीत फिल्म १९१७ कै उदाहरण लिऊँ । यसका निर्देशक साम मेन्डिसका प्राय: सबै चर्चित फिल्मका सिनेम्याटोग्राफर एकैजना छन्, रोजर डियकिन्स । मेन्डिसका १९१७, स्काइफल र रेभुलुसनरी रोडका सिनेम्याटोग्राफर यिनै रोजर हुन् ।
प्रसिद्ध चिनियाँ निर्देशक झाङ यिमुका सातवटा फिल्ममा मुख्य भूमिकामा अभिनेत्री गोंग ली थिइन् । उनीहरूको जोडी चर्चित थियो । यसलाई गुटबन्दी भनेर खारेज किन गर्न मिल्दैन भने उनीहरू मिलेर सिनेमामा कलात्मकताको खोजी गरेका थिए । गोंग लीको अभिनय क्षमताले यिमुको फिल्मलाई थप जीवन्त बनाइदिएको थियो । पल थोमस एन्डरसनका दिअर विल बि ब्लड र फ्यान्टम थ्रेड दुई भिन्न स्वाद र शैलीका फिल्म हुन् । तर, यी दुवैलाई जीवन्त बनाउने काम अभिनेता ड्यानियल डे लुइसले गरेका छन् । यसैले यसलाई उनीहरूको गुट भन्न मिल्दैन ।
मुख्य कुरा त्यो सहकार्य, एकता, समूह वा गुटले सिर्जना गरेको फिल्म कत्तिको राम्रो छ भन्ने हो । नेपालमा निर्देशक रामबाबु गुरुङ र अभिनेता दयाहाङ राईको जोडी वा दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौलाको जोडीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । धेरै वटा फिल्ममा काम गरिरहँदा पनि यी जोडीले आफ्नो कामको स्तर कायम राख्न सकिरहेका छन् कि छैनन् ? यिनीहरूको सहकार्यले फिल्मलाई फाइदा गरेको छ कि छैन ? र, साह्रै नै नसुहाउँदो भूमिकामा त उनीहरूले साथी वा समूह भएका कारण कसैलाई काम दिइरहेका छन् कि ? यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ । बाँकी कुरामा कोसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ वा मन लाग्छ, छान्ने अधिकार सबैसँग रहन्छ ।
बलिउडमा एक समय यस्तो थियो, सलिम खान र जावेद अख्तर दुईजना फिल्म लेखक फिल्ममा निर्देशकदेखि कलाकारसम्म छान्नसक्ने हैसियतमा थिए । फिल्मको पोस्टरमा निर्देशकभन्दा ठूलो अक्षरमा लेखकको नाम छापिन्थ्यो । यस्तो किन थियो भने, उनीहरूले लेखेका फिल्म राम्रोसँग चलिरहेका थिए । अमिताभ बच्चनदेखि अमजद खानसम्मलाई स्टार बनाएको श्रेय उनीहरूलाई दिइन्छ । उनीहरूले लेखेका करिब एक दर्जन फिल्ममा अमिताभ बच्चन हिरो थिए । त्यसबखत अन्य हिरो नभएर सबैमा बच्चनलाई लिइएको होइन । कारण, उनी ती भूमिकामा फिट हुन्थे । यदि फिट थिएनन् भने ती फिल्म फ्लप हुने थिए ।
त्यसैले सवाल कसको गुटमा को छ वा कसले कस्तो गुट बनाएको छ भन्ने होइन । सवाल त्यसले फिल्मको गुणस्तरलाई हानी गरेको छ कि फाइदा भन्ने हो । यदि फाइदा गरेको छ भने ठीक छ, हानी गरेको छ भने आलोचकहरूले त्यसलाई औंल्याइदिनु आवश्यक छ ।
फिल्म उद्योग ग्ल्यामरस भएकाले यसमा धेरैको आकर्षण हुनु स्वभाविक हो । एकातिर नेपोटिज्मको सिकार यो हुन्छ भने अर्कातिर पावर पोलिटिक्सको पनि । नेपाली फिल्मका सन्दर्भमा अहिले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने फिल्मको निरन्तर गिर्दो सफलताको ग्राफमा यो गुटबन्दी र समूहहरूको भूमिका कति छ ? के कुनै गुट बनेका कारण वा गुटले कसैलाई च्यापेका कारण फिल्मको गुणस्तर घटिरहेको छ ? कुनै कमसल प्राविधिक वा कम क्षमता भएका कलाकारले धेरै स्थान पाएर बिगारिरहेको छ कि ? त्यस्ता उदाहरण कति छन् ? हेर्नुपर्ने चाहिँ यहाँनेर हो ।